Ny fibre vita amin'ny metaly nanitsy sin
Ny vovoka metaly nanodinana fitaovana fanivanana
Ny tariby nanamboatra tariby nanamboatra fitaovana
Ny fahatsapana ny fihenan'ny metaly metaly dia afaka mifehy tsara ny filtration sy ny fandotoana ny sosona tokana tsapa
Ny matotra nanota dia vita amin'ny metaly tariby bitika tsy metaly, metaly ary hafanana vita amin'ny vy vita amin'ny metaly miovaova. Ny tsiranoka vita amin'ny vy vita amin'ny metaly sosona maro dia afaka mamorona grady kely amin'ny tsipika matevina samihafa, ary afaka mifehy ny fitandremana filtration sy fandotoana tsimoka tokana. Afaka mitazona ny effic filter ...
Multilayer vita amin'ny vy vita amin'ny vy matevina dia karazana fitaovana fanivanana vaovao miaraka amin'ny tanjaka sy ny fahatapahana amin'ny ankapobeny
Multilayer metra sintered mesh dia karazana sivana vaovao misy fitaovana fanamafisana sy tanjaka amin'ny ankapobeny. Vita vita amin'ny metaly multilayer vita ary vita avy amin'ny lamination tsindry sy manota vakoka. Ny mesh dia mihodina manangana rafitra fanamiana sy fanamainty. Tsy hoe ove ...
Ny singa manivana masira miova dia ho lasa matanjaka amin'ny sehatra manokana
Ny fangatahan'ny tsena: amin'ny tsena ho avy, dia hitarina bebe kokoa ny fangatahana singa fanodinam-panodinam-pahefana. Miaraka amin'ny fampivoarana haingana ny indostrian'ny lamba sy simika, ny singa manodim-pivalanana vita amin'ny tsimoka dia hanana ny fahafahan'ny tsenan'ny fitomboana haingana, ary hitombo tsikelikely ny tsenan'ny tsena ary lehibe ...
2699 South Muye Avenue, Distrikan Hongqi, tanànan'i Xinxiang, Faritanin'i Henan